4 Izindlela zokuThuthukisa zeDiskithophu ze-Digital Ukuthuthukisa Ukusebenza Kwakho - Ukukhathazeka Kwama-Expert Semalt
Ukumaketha kwe-Digital kuhlanganisa ukukhangisa kwe-imeyli, i-SEO, ukukhangisa kwe-inthanethi, imidiya yezenhlalokanye nomklamo wewebhu. Lokhu kubonisa inselelo kubanikazi bebhizinisi bendawo abafuna ukudweba ama-eyeballs amaningi kumasayithi abo. Ngokujwayelekile, leziosomabhizinisi bacwaninga kakhulu ezindleleni ezinhle zokumaketha amabhizinisi abo.
Kule ndaba, uNkk Chaykovskiy, iMenenja yeMpumelelo yabaThengi abaPhezulu i-Semalt ,ichaza ngamasu okubambisana okubalulekile we-digital okuyinto noma yiyiphi ibhizinisi engayamukela ngo-2017 - orientdb elasticsearch. Abanikazi bamabhizinisi basekhaya njengabameli, odokotela bamazinyo,odokotela, kanye nabakwa-restaurateurs bazothola amasu awusizo kakhulu.
1. Khumbula, isayithi lakho lingu "mustang" eliguquguqukayo.
Zonke izici zokumaketha kwedijithali kumele zenze i-SEO internet traffic ku-iwebhusayithi yebhizinisi. Lokhu kufanele kubhekwe njengokubaluleke kakhulu. Amawebhusayithi amaningi adalwe nge-design engaphenduliyo okusho ukuthi ayikhoinselele ukuhamba emadivaysi afana neselula futhi ubheke okungajwayelekile. Ukucwaninga kubonisa ukuthi ngaphezu kuka-43% wezimoto zamakhasimende ezivela kumakhalekhukhwiniamadivaysi anomumo ohloselwe ukwandisa. Ngakho-ke, isayithi lebhizinisi kufanele likhangise nge-navigation elula kumajejethi weselula. Izivakashikufanele sikwazi ukuchofoza ekhelini le-imeyili noma inombolo yefoni ukuze uxhumane nomnikazi webhizinisi noma ukuphathwa. Ukwengeza, uma amakhasimende anakhoukubhala phansi othintana nabo, khona-ke inkampani kungenzeka ilahlekelwe yiyo yabaqhudelana namasayithi axhumene neselula. Ngakho-ke,ukuguqula izivakashi ukuba zidle i-imeyili, ucingo noma ukuhamba.
2. Yenza "izimpendulo ezicebile" kuwebhusayithi.
Abantu manje bashintsha ukuthi basebenzisa kanjani i-Google. Izivakashi azikafunibheka ulwazi kodwa ukhethe i-Google ukuphendula imibuzo yabo. Njengenkampani, i-Google isitshale ngaleli thuba ngokungenisa"izimpendulo ezicebile" ku-algorithm yokusesha nokuthuthukisa isipiliyoni se-SEO. Lokhu kunikeza imiphumela enembile kakhulu. Kulokhu, noma yiliphi ibhizinisi lendawoumnikazi unemibuzo evamile abavame ukuphendula kusuka kumakhasimende. Ngakho-ke, kungaba kuhle ukufaka izimpendulo ezicebile kwiwebhusayithi yebhizinisiukuze zivele kuqala uma i-Google ibuzwa imibuzo.
3. Sebenzisa ama-social media ngokuhlakanipha.
Kubonakala sengathi amabhizinisi amaningi asendaweni athinjwa lapho ekhetha eziteshini zenhlaloukusebenzisa kanye nokuthi ukuthunyelwa kufanele kwenziwe kanjani. Umthetho obalulekile ukuqonda isisekelo sakho samakhasimende. Imithombo yezokuxhumana akuyona into entsha. Ukuvumelanisaamakhasimende akho, qalisa nabanye ochwepheshe bezokuxhumana. Ngaphezu kwalokho, ukuthumela kuma-social media kumane kudala izwi lebhizinisingaphezu kokuxhumana namakhasimende aqotho. Ngakho-ke, osomabhizinisi kufanele aqaphele ukugwema ukulayisha ngaphezulu isayithi ngokukhushulwa kanye nezici.
4. Hlala ugxile ekukhangiseni kwe-imeyili.
Eminye iminyaka emuva, ukumaketha kwe-imeyli kwabekwe eceleni ukuvula indlela yokuxhumanaukumaketha kwezindaba. Kodwa-ke, kumabhizinisi amaningi asekhaya, ukumaketha kwe-imeyili kuyindlela engabizi futhi enhle yokuxhumana namakhasimende. Instagramfuthi i-Facebook show post ibe yingxenye encane yabalandeli. Kudinga ukuthi umuntu akhokhe ukuze afinyelele abantu abaningi. Umuntu osomabhizinisi angathumela izinto ezintsha zemenyu,ulwazi lomcimbi futhi okukhethekile ngaphandle kwezindleko ngokusebenzisa i-imeyili. Ukusetshenziswa kwe-MailChimp kuvumela umnikazi webhizinisi ukuthi athumele imilayezo kubathintana abangu-2 000 okuyizintoisiteji sokuthengisa esisebenzayo.
Ekuphetheni, abanikazi bebhizinisi bendawo kumele babheke ibhizinisi labo njaloamawebhusayithi ukwenza ulwazi lokuxhumana oluqinisekisiwe lusebenza. Amanye amasu wokuthengisa we-digital angase asetshenziswe ukushayela ithrafikhi eyaisayithi.